Tapany avaratry ny Nosy : hiverina hikija be indray ny orana | NewsMada
Omaly, nilaza ny mpamantatra ny toetr’andro etsy Ampandrianomby fa mbola misy indray ny andian-drahona matevina mitoetra ao amin’ny faritra avaratry ny Nosy. Voakasik’izany ny ao Nosy Be hatrany Analalava ary tonga hatrany Cap d’Ambre.
Heverina, araka izany, ny mbola hisian’ny rotsak’orana maharitra indray amin’ireo toerana any amin’ny tapany avaratry ny Nosy manomboka amin’ny alakamisy izao ary hitohy ny zoma sy amin’ny faran’ny herinandro any an-toerana.
Sasatry ny miarina, araka izany, ny mponina any avaratra amin’ny afitsoky ny faritra andro ratsy. Tsy mbola tafarina akory ny fahavoazana nateraky ny ora-mikija nianjady tamin’ny mponina any amin’iny tapany avaratra iny tamin’ny herinandro lasa iny, izao tandindomin’ny andro ratsy izao indray.
Raha tsiahivina, tafakatra telo no maty tany Mampikony ary 23.000 mahery ireo traboina. Niteraka fahatapahan-dalana naharitra andro maromaro ny ranobe ary maromaro ihany koa ny trano rava sy dibo-drano.
Mila mitandrina, araka izany, ny mponina any amin’ny tapany avaratry ny Nosy manoloana ity fihavian’ny orana manomboka amin’ny alakamisy ity indray.
Mifanohitra ny any atsimo sy avaratra
Raha oran-dava ny any amin’ny tapany avaratry ny Nosy, mifanohitra amin’izany kosa ny any amin’ny tapany atsimo. Haintany, kere, hanoanana no mianjady amin’ny mponina any atsimo. Manaporofo ny fikorontanan’ny toetr’andro sy ny fahasimban’ny tontolo iainana izao tranga mifanao atsimo sy avaratra izao.